‘कमलकै नमुना वडा बनाउने अभियानमा छौं ’ - Damak No.1 Online Patrika
डम्बर बहादुर निरौला झापा, कमल गाँउपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । सामाजिक क्षेत्रसंगै सहकारीमा नेतृत्यदायी भूमिकामा सक्रिय निरौला वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि हिजोआज वडाका विकास निर्माण तथा जनताका सुखदुखमा केन्द्रीत रहिआएका आउनुभएको छ । वडालाई गाँउपालिकाकै नमुना वडा बनाउने अभियानमा सक्रिय उहाँ आफना कार्यकालभरि वडाको मुहार फेर्ने ढृणता व्यक्त गर्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएपछि विकासले तीवता पाउदै आएको उहाँको दावी पनि छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ,–‘ स्थानीय सरकारको जवाफदेही भूमिकाका कारण विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति हुदै गएका छन्। ’
प्रस्तुत छ वडाध्यक्ष निरौलासंग वडाका विकास,निर्माण र भईरहेका गतिविधिहरुमा बारेमा गरिएको कुराकानी :
जनप्रतिनिधि भएपछि वडाका विकास निर्माण तथा अन्य समस्याका बारेमा केन्द्रीत रहिआएको छु । वडालाई गाँउपालिकाकै नमुना सुन्दर वडा बनाउने अभियानमा जुटेको छु । तर, यी काममा स्थानीयबासिन्दाहरुको भरपूर सहयोग प्राप्त गरेको छु ।
त्यस्तै, वडाबाट चालु वर्षको योजनाहरुको अनुगमन र आगामी आर्थिक बर्षका लागि टोल,वस्तीमार्फत योजना संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौं । वडाका पाँच वटै क्षेत्रबाट आएका आवश्यकीय विभिन्न योजनाहरुलाई विषयगत योजनामा समावेस गर्ने कार्य लगभग सम्पन्न भईसकेका छन् ।
वडाका टोल ,वस्ती भेलाबाट योजनाहरु संकलन गरिरहदाँ वडाबासीले कस्ता योजनाहरु माग के गरेका छन् ?
वडाको योजनाहरु वडाबासीले आफै छानुन भन्ने अभिप्रायले पनि यो छनौट प्रकृया वजेट निर्माणका क्रममा सञ्चालन गरिआएका छौं । हामीले पाँच स्थानमा सञ्चालन गरेका ती टोल तथा वस्ती भेलामा सवै सरोकार पक्षहरुको सहभागिता रहेको पाएको छु । मुख्यतय वडाबासीले सडक, कृषि, विद्यालय सुधार,खानेपानी ,विजुली,सीपसिकाई, स्वास्थ्य तथा सरसफाई,वृक्षारोपण जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा बजेट माग गरेका छन् ।त्यससंगै स्वास्थ्य,सुरक्षा ,खेलकुद तथा अन्य सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम पनि वजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् । वडाको समग्र विकासका लागि वडाबाट आएका सवैखाले सहयोग,सुझावलाई आधार मानेर वडा कार्यालयले वजेट ल्याउने नै छ ।
वडाको २ करोड २८ लाख हाराहारीको आउने वजेटमा वडाका सवै खाले योजनाहरुलाई सकेसम्म समावेश हुने गरि काम थालिसकेको पनि छु ।
चालु वर्षमा वडाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु कतिका पूरा हुदै गएका छन् ?
यसवर्ष तुलनात्मक रुपमा धेरै काम भएका छन् । वडाका आफनै स्रोतदेखि प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट समेत आएका योजनाहरुका काम धेरै भएका छन् । कतिपय योजनाहरु पूरा भए भने कतिपय दुरगामी महत्व राख्ने आयोजनाहरुको काम शुरुवात भएका छन् । अघिल्ला वर्षभन्दा यसवर्ष वडामा भएका कामबाट हामी पनि सन्तुष्ट हुदै आएका छौं । संविधान अनुसार स्थानीय सरकारको अभ्यासका क्रममा भएकाले पनि हामीले पहिलो वर्ष भन्दा यसवर्ष धेरै काम गर्न सकेका छौं ।
चालु वर्षमा वजेटमार्फत विनीयोजित कुन कुन योजनाहरु पूरा भए त ?
हामीले चालु वर्षमा २ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाको विनीयोजित वजेटबाट विषयगत योजनाहरुका धेरै काम गरेका छौं । वडा भित्रका पूर्वाधार कार्यक्रमहरुसंगै ,विद्यालय सुधार योजना,चाँजु खोला तटबन्धन, साधु होली सिमसार क्षेत्रलाई वडाकै पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्ने गरि काम थालेका छौं । चाँजु खोलालाई तटवन्धन गरि त्यस्ता जलाशयको संरक्षण गर्न राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम अन्तर्गत ५० लाख रुपैयाको लगानीका काम भएका छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गसंग जोडिएका पाडाजुंगी र पाडाजुंगी –गौरीगञ्ज अन्तर्गत वडा भित्रको मंगलवारेवजार सम्मको अतिक्रमित सडक संरचना हटाएर व्यवस्थित गर्ने काम थालिसकेका छौ । जसले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा वडाको सुन्दरतामा समेत सघाँउ पुरयाँउने छ । त्यस्तै, जनसहभागितामा पाडाजुंगी आइतबारे सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य पनि यसैवर्षको वजेटबाट काम गरेका छौं । यस्तै, मंगलमय माविमा प्रदेश सरकारको सहयोगवाट ४९ लाख लगानीमा ट्रष्ट लगाउने काम भएका छन् ।
अघि नमुना वडा बनाउने कुरा गर्नुभयो , यसको संक्षेपमा अर्थ बुझाईदिनुस न?
राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो । हामीले कमल गाँउपालिकाका ७ वटा वडाहरुभन्दा यस वडालाई नमुना बनाउने अभियान जारी राखेका छौं । वडाको मुख्य वजार क्षेत्रलाई विकास गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रका सम्रग विकासमा दुरगामी महत्वका साथ वडाको विकासमा दत्तचित्त भई लागेका छौं । मुख्यतय यस वडाको पूर्वपश्चिम राजमार्ग जाुडिएको वजार क्षेत्र पाडाजुंगीलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य धमाधम भइरहेका छन् । त्यहाँ सडक मिचेर घर टहरा वनाएका अव्यवस्थित संरचना हटाउने कार्य सकिसकेका छौं । सडक मापदण्ड अनुसार वडाको रतुवा पुलदेखि पूर्वमा सितापुरीसम्मका क्षेत्र व्यवस्थित गर्न वडा कार्यालय लागिपरेको छ । त्यसो गरिए वडाले नयाँ स्वरुप प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको छु ।
हामीले पाडाजुंगी चौंकको मध्य भागमा रहेको आइलैण्डलाई सुहाउदो बनाउदै दुवैतर्फको बस स्टेण्ड बनाउने कार्यमा क्रियाशील छौं । वस स्टेण्डलाई कालोपत्रे गर्न सडक विभागले गरिदिने भएको छ । सडक आसपास फूटपाथमा रहेका घर,टहरा तथा अन्य संरचनाहरु हटाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न वडाले धमाधम काम जारी राखेको छ । ती काममा गतवर्ष ५ लाख र यो वर्ष थप ८ लाख खर्च भएको छ । यसले हिजोको पाडाजुंगी,मंगलवारेलाई समय सुहाउदो व्यवस्थित वजारका रुपमा विकासतर्फ लम्कन मद्धत गर्ने छ ।
पाडाजुंगी क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनले मात्र वडाले नमुना प्राप्त गर्ला र ?
निश्चय पनि हामी वडालाई नमुना वार्डका रुपमा विकास गर्न पाडाजुंगीसंगै वडाका हरेक विषयमा अत्यन्त गंभीर भएका छौं । राजमार्ग आसपासमा देखिएको मुख्य समस्यालाई भने के कसरी हुन्छ व्यवस्थित बनाउने सवाल वडा कार्यालयका लागि प्राथमिकताको विषय हो भन्ने लाग्छ पनि । वडा भित्रका अन्य क्षेत्रको विकासमा समेत कार्यालयले उच्च प्राथमिकता दिदैआएको छ । हामीले वडाको शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि,सडक ,ग्राभेल, कल्र्भट निर्माण लगायतका विकास र समृद्धिका हरेक पाटामा उत्तिकै महत्व दिदैआएका छौं । यी सवै कार्य सम्पन्न गर्न वडा भित्रका सवै राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्थाहरु, उद्योगी,व्यवसायी,सहकारीकर्मीहरुको साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ ।